Dhir (Af-Ingiriis: plant; Af-Carabi: نبات) sidoo kale loo yaqaano Dhirta Cagaaran waa noole ka samaysan unugyo badan oo isku xidhan taasi oo ka baxda oogada sare ee dhulka. Dhirtu waa kalmada jamcisa dhamaan geedaha noocaydooda kala duwan ee laga helo carada dusheeda, biyaha dhexdooda, buuraha iyo meelo badan oo kala duwan. Waxa jira noocyo badan oo dhirta ah kuwaasi oo lagu qiyaaso in ay ka kooban yihiin ilaa 375,000 oo nooc. Guud ahaan dhirtu waxa ay ka kooban tahay qaar iniinyo leh (Seed plants) iyo qaar aan lahayn. Waxa kale oo ay ka kooban tahay qaar qodax leh iyo qayb aan qodax lahayn haba yaraatee. Qeybaha rasmiga ah ee dhirtu waa dhirta ubaxa leh (flowering plant), caleen-yare (carnifers), feerno, Lycopodiopsida, jirid-yare, algiya, caleenley iyo shurub. Dhirtu waxay ka mid tahay Nooleha. Sidoo kale, dhirtu waxay leedahay unugyo-dahaadhan (cellwalls) kuwaasi oo u suurta geliya ineey sameeysato cunto ayadoo isticmaaleysa ileyska qoraxda, biyo iyo kaarboon-labo-ogsajiin. Dhirtu waxay manaafacaad iyo faa'iido badan u leedahay dunidan aan ku noolnahay; waxay suurto-gelisaa in hawada ka soo saart kaarboonka isla markaana ku sii deeyso hawada Ogsajiin oo ah mida teegeerta nolosha xayawaanka iyo dadka. Intaas waxaa dheer in dhirtu soo saarto midho, caleemo, jirid iyo xidido kal duwan taasi oo ay quud iyo cunto ka dhigtaan dhamaan noolaha intiisa kale ee xayawaanka iyo dadku ka midka yihiin. Guud ahaan waxaa jira noocyo badan oo dhir ah; kuwaasi waxaa ka mid ah: beeraha, keymaha, iyo dhuldaaqsiimeedka. Maadaama juqraafiga dhulku kala duwan yahay, meelaha dhirtu ka baxdo aduunyada weey kala duwan tahay. Meelaha qaar waxaa ka baxa kumanaan nooc oo dhir ah, halka deegaanada qaar (sida saxareha ama lamadegaanka) ay ku yar tahay dhirtu. Maadaama noloshu ku tiirsan tahay dhirta waxaa waajib ah in la ilaaliyo jiritaanka, koritaanka iyo caafimaadka dhirta. Dhirtu waa noolaha kali ah ee cuntadiisa diyaarsada ayagoo isticmaalaya nidaam loo yaqaano Habka Samayska Cuntada. (SII AQRI)
Koonfur Suudaan ama Jamhuuriyada Koonfurta Suudaan waa dal ku yaal bariga afrika waxaana caasimada u ah Jubba waxeey xad la wadaagtaa Suudaan oo ka xigta woqooyiga, Itoobiya oo ka xigta bariga, Yugandha, Kenya oo ay ka xigaan koonfurta, iyo Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika oo ka xigta galbeedka. Koonfurta suudaan waxey mar ka mid ahaan jirtay dalka Suudaan, waxayna kala go'idooda u sabab noqotay 2dii dagaal ee Suudaan, waa markii ee Koonfurta Suudaan noqotay gobol ka madax banaan. Shacabka reer Koonfur Suudaan waxaa afti laga qaaday 9 Janaayo ilaa 23 Janaayo 2011, waxayna 98,83% doorteen in ay go'aan. Taariikhda markay ehayd 9kii Febraayo 2011, Koonfurta Suudaan waxay ka mid noqotay Qaramada Midoobay, sidaas darteed waxay noqotay wadanka 193aad ee caalamka ama wadanka 54aad ee Qaarada Afrika. Ma jirto taariikh horay looga qoray Koonfurta Suudaan, laakiinse waxaa jirto hadalo afka laga soo dhahay, oo ah in Koonfurta Suudaan markeeda hore ee wada degenaan jireen dad reer baadiya ah, intii aysan imaanin qoomiyadaha Dinka iyo Nuer sanadihii 800. Taariikhda marka ay eheed 1822kii Woqooyiga Suudaan waxaa qabsaday Cusmaaniyiinta Masar, Koonfurta Suudaan way madax banaaneed, laakiin 1899kii ayaa Ingiriiska iyo Masaarida qabsadeen dhamaan woqooyiga iyo koonfurtaba. Sanado yar ka hor intii ay Suudaan ka madaxbanaaneed Ingiriiska, wuxuu Koonfurta Suudaan iyo Woqooyiga Suudaan ula dhaqmi jiray gobolo kala go'an, sababo la xiriiro cabsi laga qabay cuduro. Gobolada waxay xornimadooda heleen 1956kii. Intii aysan madaxbanaanidooda si rasmi ahaan u helin 1955kii, Koonfurta Suudaan iyo Woqooyiga Suudaan waxaa dhexmaray dagaalo oo ay Koonfurta Suudaan ku diidayso in ay hoostagto caasimada Khartuum, dagaaladaas waxay noqdeen kuwa aad u xun oo xukumada Khartuum ku layneeso shacabka Koonfurta Suudaan. (SII AQRI)
Maanta Oo Kale
Taariikhdu Maata Waa 16 Luuliyo 2018 Isuduwaha Waqtiga Caalamiga (UTC) – Hagaaji Bogga
Xusuusta dhacdooyinka maanta
Xusuusta Dhacdooyinka Maanta :
Kuwa ugu muhiimsan Xusuusta dhacdooyinka sanadkaan - Maalmaha sanadkaan oo dhan
Waa maxaay Wikipedia ?
---Qaabka aad wax uga bedeleyso FG. Luqada waa english
Wikipedia (loogu dhawaaqo ˌwiˑkiˈpidi.ə). Waa bar laga helo Web-ka oo ah Qaamuus qoran. Waxaa qorey dad iskood ugu qora luuqadadooda oo aan dawlad ama haayadi diran. Qofkwalba oo guriga khatka internetka ku heysta, yaqaanana sida loo isticmaalo wuu ka qeybqaadan kaaraa Qaamuuskan oo sidii cilmi Soomaaliga ku qoran loo soo gelin lahaa halkan. Arintan oo la bilaabay 2001 Ingiriiskuna (english) ugu horeysey ayaa waxaa ku xigey luuqado badan oo kuwa ugu waaweyn ay yihiin Jarmal , Faransiis , Isbanish iyo Talyaani.
Taariikhdu markii ay ahayd 18/01/2012 ayaa waxa hawada ka baxay wikipedia laakiinse isla maalin ka bacdiba waa ay ku soo noqotay hawada.
Waxaa laga keenay "https://so.bywiki.com/w/index.php?title=Bogga_Hore&oldid=132249"